Ampidino Reshade 3.0 ho an'ny Windows
Sehatra: Windows Version: 3.0 Fiteny: English
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (43.30 MB)
Ampidino Reshade, Ny Reshade dia rindranasa manitsy ny pixel aminilay sary nohalehibeazinao ary mamokatra sary kalitao tsara kokoa. Reshade dia karazana fampiharana fanovana sary. Tokony ho hitanao fa mihena ny kalitaonny sary misy vahaolana ambany rehefa entinao any aminny tahanny vahaolana avo lenta izay tadiavinao.
Na dia azonao atao aza ny manao hetsika toy ny fitadiavana kinova famahana lehibe kokoa aminity sary ity hamahana ity olana ity dia indraindray mety tsy hanana fotoana toa izany ianao. Raha manana fahalalana Photoshop aminizany ianao, na dia azo atao aza ny mampiakatra ny kalitao aminny talentao manokana, dia misy fomba mora kokoa. Ny Reshade dia miasa ho anao ny asa rehetra voalaza etsy ambony.
Raha atao teny hafa, raha diso ny sary iray izay lehibe kokoa ny refesiny, dia ahitsy ho azy io fanodikodinam-po io i Reshade ary ento any aminny haavo tadiavinao io sary io.Voalohany indrindra, mampakatra sary aminilay rindranasa ianao. Avy eo dia mila apetrakao ny refy vaovao aminny sary ao aminny fizarana Safidy Main. Raha sendra misy fahasimbana ianao aorianity fanitsiana ity dia azonao atao ny manatratra ny vokatra tsara indrindra aminny fampitomboana na fampihenana ireo safidy toa ny Denoise, Reduce Artifact izay hita eo aminny ilanny ankavananny fampiharana.
Haben'ny rakitra: 43.30 MB
Fanavaozana farany: 07-04-2021
Hotspot Shield dia programa proxy mahery izay mamela anao hijery Internet tsy mitonona anarana...
EZ Game Booster dia programa fampiroboroboana solosaina izay manampy anao hilalao lalao tsaratsara...
Registry Reviver dia programa iray ahafahanao mizaha ny firaketana Windows, manamboatra lesoka ary...
Miaraka aminny ComboFix dia afaka manadio viriosy ianao raha tsy mandeha ny rindrambaiko antivirus....
Fitaovana fikojakojana rafitra maimaim-poana izay ahafahanao manatanteraka mora foana ny fizotranny...
Aminny alàlanny Glaser Tracks Eraser dia azonao atao ny manadio rakitra sy tantara tsy ilaina ao...